Wararka - Qaliinka nidaamka hawo-haadis ee cadaadiska sare
Khabiir Ammaan ah, Keydinta Tamarta iyo Xakamaynta Qulqulka Xakamaynta Qulqulka Deegaanka
Wac Taageero 0086-15811508066
Taageerada emaylka sales@convistafc.com
Qaliinka Dhuumaha Saliida & Gaaska
Shaandhaynta & Qaliinka Petrochemical
Qaliinka saldhigga korontada
Nidaamka Nidaamka Biyaha
SHAQAALAHA & SHALAYTA
Y Nooca Cadaadiska
Wadajirka Balaadhinta Rubber
Wadajirka Kala daadinaya
Qaliinka nidaamka hawo-faydhinta cadaadiska sare
Teknolojiyada Hydrogenation ee batroolka waa geedi socod muhiim u ah wax soo saarka batroolka, wax ka beddelka iyo ka shaqeynta saliidda culus. Kaliya maahan inay hagaajiso qoto dheerida geeddi-socodka labaad ee saliidda ceyriin iyo heerka soo-kabashada ee hydrocarbon-ka fudud, laakiin sidoo kale waxay kordhinaysaa tayada saliidda shidaalka waxayna yareyn kartaa wasakheynta deegaanka. Sidaa darteed, daaweynta biyaha, dildilaaca biyaha ama soo-haynta daaweynta iyo nidaamka kale ee hydrogenation-ka ayaa noqdey qeybta ugu muhiimsan unugga sifaynta. Unugga Haydarojiinjiyuhu wuxuu ku jiraa heerka khatarta dabka A, waa astaamaha farsamo ee waaweyn waa heerkul sarreeya, cadaadis sarreeya, dib u habeynta haydrogen. Hydrogenation fureyaasha cadaadiska sare waa: tikniyoolajiyad sare, shuruudaha tayada adag, amniga iyo kalsoonida.
Farsamooyinka loogu talagalay hydrogenation-ka cadaadiska sarreeya waxay leeyihiin astaamaha soo socda, marka lagu daro shaqooyinka filtarka guud:
Waxay baabi'isaa qiiqa baxsadka ah ee waxsoosaarka si loo hubiyo waxqabadka xirmidda waalka, nooca isku xirnaanta jirka iyo jirida waxaa lagu dabbaqayaa cadaadiska xiran, iyo guntin, giraanta wax lagu xiro iyo giraan afar-cunsur ah, iwm waxaa loo xisaabinayaa gebi ahaan sida ku xusan EN 12516-2 ilaa iska ilaali daadashada.
Jidhku wuxuu leeyahay falanqeyn cadaadis hoosta marxaladda shaqada oo leh softiweerka falanqaynta ANSYS, iyo geeska aagga walaaca waxaa lagu sameeyaa falanqeyn culeys filim ah si loo hubiyo qallooca jirka, si looga fogaado qulqulka gudaha.
Xirmooyinka ayaa ah garaaf saafi ah (kaarboon saafi ah content95%) iyo giraanta garaafka birta birta ah ee birta ka sameysan ee ka sameysan Shirkadda US GARLOCK. Cufnaanta giraanta garaafka ee horay loo sameeyay waa 1120kg / m3. Dhamaan xirmooyinka waxaa ku jira ka hortagga daxalka. Waxyaabaha ay ku jirto maadada chloride power filter waa <100ppm oo ay ku jiraan xabagyo, saliid iyo waxyaabo kale oo lagu daro, si looga fogaado wasakhda jirida ee CI iyo qiiqa baxsadka ah ee dhexdhexaadka ah.
Nidaamka loo shubay qaybaha cadaadisku waxay ku saleysan yihiin habka loo shubay qiimeynta u hoggaansamida, kuwaas oo leh 100% tijaabooyin aan burburin. Badeecada nus-dhammaadka ah ee kabka ayaa la jaan qaadaya shuruudaha kuleylka heerkulka sare iyo cadaadiska sare ee hydrogenation-ka; Mashiinnada iyo isu-geynta si adag ayaa loo dhaqan-galiyaa iyo habka isu-imaatinka.
Cabir 2 ”~ 24”
Qiimeynta Fasalka 600 ~ Fasalka 2500
Heerka naqshada API 600, API 6D, BS 1873, ASME B16.34
Tijaabinta & kormeerka API 598, API 6D, ISO 5208, ISO 14313, BS 5146
Qalabka Jirka Birta Kaarboon, Bir Daxal ah, Bir Daawaha ah, Bir Duplex
Howlgalka Gawaarida gacanta, Qalabka, Matoorka, Pneumatic
Fiiro gaar ah: Cabbirka waalka taxan ee isku xira flange waxaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Waqtiga boostada: Nofeembar-10-2020
CONVISTA waxay u heellan tahay baaritaanka iyo keenista dhammaan noocyada qalabka xakamaynta socodka sida Valves, Valve actuation & Controls, Bambooyin iyo qeybaha kale ee la xiriira & qalabka sida Flanges & Fittings, Strainers & Filters, Joint, Flow meters, Skids, Casting & forging qalabka iwm.
CONVISTA waxay soo saartay Para ...
CONVISTA waxay bixisaa midnimo ...
CONVISTA oo ay ansaxisay Cuntada ...
CONVISTA la siiyay qandaraas t ...
Qaliinka cadaadiska sare ...
Tuur Steel Double Double Balanbaalis Madax, Double Balanbaalis Balanbaalis Madax,